Sonke sinesiphathiswe khona okungasisiza ukusungula izinto ezintsha, kuloba uNtokozo Biyela - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Njengazo zonke izinto eziqhakanjiswa umhlaba wonke ezibalulekile, kubalulekile ukuvezwa kobuchule bokuqala izinto ezithinta amabhizinisi. Umhlaba wonke umile nje ugcwele izinto eziwubukhazikhazi yingenxa yabantu abanombono nobuchule ekuqaleni izinto noma ekwakheni izinto zisuka phansi.
Yilolu hlobo lwabantu olwenza izinto zenzeke, amadelakufa. Ngike ngahleka ngedwa ngicabanga ukuthi kazi kwakunjani kudala uNkulunkulu esanda kudala umhlaba? Abantu bokuqala okwakufanele baqambe izinto noma bakhe izinto ezazingekho zibe khona. Cabanga nje abantu bokuqala abasukela izinhlobonhlobo zezilwane, bezibulala bezidla, mhlawumbe bengaziphekile, noma bengayosile inyama yazo. Abantu abaqala ukudla izinhlobonhlobo zezithelo namaveji babenesibindi esikhulu.
Ngiyacabanga nje ababebukele babebambe umoya ukuthi kazi iyozala nkomoni uma selishona ilanga. Ingabe bazogula noma bazofa?
Lawo madelakufa yibona- ke abantu ababangamavulandlela ekutheni umhlaba wonke lo uqhamuke nazo zonke lezi zinto esesizibona manje ngamehlo esizibiza ngezinto noma imikhiqizo. Ukuqala izinto noma izindlela ezintsha kuyisiphiwo esingandele bani.
Akulula ukuqala phansi izinto noma ukuqhamuka nendlela ewubuchule nobunyoninco yokwenza izinto. Yingakho lolu suku lubaluleke kangaka ngoba lukhuthaza ukuthi abantu baqhubeke benze izinto, bakhe izindlela eziningi zokusombulula izinkinga umhlaba obhekene nazo.
Ngesonto elidlule leli ziko lakho eliyintandokazi kuwena Umbele beligubha ukuqeda unyaka lasungulwa. Ave ngithanda ukubona izinto ezisungulwa zisuswa phansi. Ngazithola ngiba nenhlanhla yokuba yingxenye yokusungulwa kweziko lezindaba elihlabahlose kangaka.
Ngabona ngalawa awami amehlo abasunguli baleli ziko belisusa phansi. Okwangihlaba umxhwele wukubona yindlela ababehlela ngayo indlela abazolakha ngakhona nangendlela ababezolethula ngayo emphakathini.
Lapha sibone iziko lezindaba ebelingaziwa muntu, linganakwe muntu kodwa manje eselihambe kakhulu selaziwa futhi lithandwa ngabantu abaningi. Baningi abantu abaqala noma abaqale amaphephandaba kodwa awakwazanga ngisho ukusuka phansi noma ukuhamba ibanga elide. Leli ziko liya kude uma ulandela umsuka walo nokuthi abasunguli balo banaziphi izinhlelo zokulikhulisa.
Liyisibonelo sokuthi yizipihi izinyathelo okumele uzithathe uma ubona ukuthi kukhona isikhala endimeni okuyona nokuthi ulikhulisa kanjani ibhizinisi elincane ligcine selingelinye lamabhizinisi ahlonishwayo endimeni yalo.
Kuningi futhi lukhulu esingakufunda mayelana nohambo lwabasunguli nalo iziko lezindaba zamabhizinisi Umbele. Yingakho lolusuku olusanda kudlula ngithande futhi ngabona kufanele siphakamise abasunguli baleli ziko uMnu uLanga Khanyile noNkk uSlindile Khanyile ngomsebenzi omuhle asebewenzele isizwe nabantu abafunda izindaba zamabhizinisi nezomnotho ngesiZulu. Sithi halala kubona ngokuba ngamavulandlela ekubikeni nasekubhaleni izindaba zamabhizinisi nezomnotho ngesiZulu. Sinifisela okuhle kodwa, niyisibonelo esihle eNingizimu Afrika.
Nawe mfundi wale ngosi ngiyathemba ukuthi lolusuku lokugubha abanamakhono okusungula izinto eziningi esizibona ngamehlo, lukugqugquzele ukuthi ubhukule wakhe.
Kwenye yezingosi engike ngayibhala, ngakubeka ukuthi kahle-hle sonke sineziphiwo namakhono uNkulunkulu asipha wona sifika kulo mhlaba. Thina okufanele sikwenze wukuthi sizifune ngaphakathi ukuthi yini ngempela esinethalente layo noma yisiphi isiphiwo esinaso kodwa esingakaveli. Ngingasho ngokungananazi ukuthi eminyakeni edlule ngangingazi kwamina ukuthi nginethalente lokubhala.
Ngokuzihlupha ngiloku ngibhala, ngizama, ngithumela imibono yami emaphephandabeni ahlukene yagcine isishicilelwa. Loko kwaba yinkomba yokuthi likhonyana ikhono lokubhala. Ngagcina ngibhale incwadi ethi Mindset Shift.
Njengoba ngibhala namuhla nje mfundi wale ngosi ngeke ukholwe uma ngikutshela ukuthi lesi yisiqephu sika-53 sale ngosi. Kusho ukuthi sekuphele amasonto awu-52 golokoqo nginawe kule ngosi uma kuwukuthi waqala nathi ekuqaleni.
Ngithanda ukukubonga ngokuba nathi, ngethembe ukuthi usazoqhubeka ube nathi uncele kogwansile.